I-Apple ibuyisela iParler kwiVenkile ye App ngokutshintshisa ukumodareyitha okungakumbi | Ndisuka mac
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo sikuxelele ukuba abanye abameli abanyuliweyo baseMelika babegxeke indlela yokwenza iApple ngexesha lokuthintela ukusetyenziswa kwe Parler kwizixhobo zohlobo lwaseMelika. I-Parler ithathwa njengenethiwekhi yentlalo ekhethwe ngabantu abalahlayo kunye nabasekunene abanokuyisebenzisa ekuhlaseleni iCapitol. UApple wayirhoxisa kwintengiso kodwa ngoku Iyayamkela kodwa inezinye iimeko.
Ipolitiki ihlala igxile kuzo zonke iinkalo zobomi bethu. Kungcono okanye kubi. Kule meko, umgaqo-nkqubo ungena kwinkampani yabucala ethathe isigqibo sokuba iapp ayifanelanga ukuhlala kwiVenkile yeApple kuba iphula imithetho yevenkile. Nangona kunjalo, emva kwempama esihlahleni ukuba inkampani ithathe ibhloko yokususa iParler kwivenkile, iyibuyisile.
Kuyinyani ukuba ibali liyahambelana. Ndithetha ukuba iApple ibonelele ngeParler iiyure ezingama-24 zokuphumeza inkqubo yokumodareyitha umxholo. Ngaphandle koko iya kususwa kwiVenkile yeApple. Inkampani yaxhathisa kwaye ke isicelo sasuswa njengoko i-Apple yayithembisile. Kwiinyanga ezidlulileyo, nangona kunjalo, iApple ibigcine ucango luvulekile ukuvumela usetyenziso ukuba lubuye. Ibisekwe ngokuvakalayo nokuba uyiphumezile i sinkqubo yokumodareyitha umxholo.
Ulwazi olutsha lumisela ukuba iApple isamkele kwakhona isicelo evenkileni kuba iphumeze inkqubo dukufumanisa ngcono intetho enentiyo kunye nomnye umxholo okhohlakeleyo. Oku ubuncinci kuyacaca kule leta ithunyelwe yinkampani yetekhnoloji kwiCongress, ichaza ukuba kutheni ibuya. Kubonakala ngathi ayinakhutshelwa ngaphandle, kodwa nje ukuba ukwamkelwa kwenziwe ngumcimbi wexesha ngaphambi kokuba iphinde ivele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » U-Apple uphinde wamkele iParler kwiVenkile ye App ngokutshintshisa ukumodareyitha okungakumbi